यो हप्ता यी ४ राशिको लागि रहनेछ अत्यन्त शुभ, मिल्नेछ भरपूर लाभ ! – Sandesh Press
November 27, 2020 378
महत्वपूर्ण कार्यहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ वा प्रगति हुनेछ। धर्म-कर्ममा रुचि बढ्नुका साथै धार्मिक स्थानको यात्रा पनि सम्भव छ। रोजगार भएका व्यक्तिहरूले पदोन्नति प्राप्त गर्न सक्छन्। जग्गा, भवन र सवारी साधनहरू सुविधाको बृद्धिको योग छ। जीवनसाथीको स्वस्थ बिग्रन सक्छ। अचानक कुनै चीजको खरीदमा ठूलो पैसा खर्च होला।
यो हप्ता वृश्चिक राशिको लागि शुभ हुनेछ। परिवारमा कुनै धार्मिक काम आयोजना हुनसक्छ। विशेष कार्यको लागि प्रयास सफल हुनेछ। व्यापारमा अप्रत्याशित लाभ हुनेछ। कामको खोजीमा रहेलाले सफलता प्राप्त गर्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ। यात्राको योग छ। प्रेम सम्बन्ध मजबूत हुनेछ।
क्यारियर र व्यवसायको हिसाबले यो हप्ता धनु राशिका मानिसहरुका लागि नयाँ अवसरहरु ल्याउँदैछ। पहिलेका विचार योजनाहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ। घनिष्ट व्यक्तिको सहयोगमा, परिवारका सदस्यहरूसँगको कुनै लामो समयदेखि रहेको गलतफहमी हटाउन सकिन्छ। प्रेम सम्बन्ध मजबूत हुनेछ। कसैसँग बिर्सेर पनि पैसा ऋण नलिनुहोस्।
राजनीतिसँग सम्बन्धितहरूका लागि यो हप्ता विशेष रूपले शुभ छ। व्यपार व्यवसायमा अपेक्षा भन्दा बढी लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। आयका विभिन्न स्रोत भेटिनेछन्। पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन आदिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले सम्मान पाउनेछन्। हप्ताको अन्त्यमा, महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्य वा अरू केहि विषयले चिन्तित हुनेछन्।
Prevराजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस !
Next७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सु’ताएर स्लाइन दिदैँ, यस्तो छ अवस्था !